Ajụjụ - Dongguan Zhantuo Optical Lens Co., Ltd
GPS akwọ ụgbọ mmiri Car HUD Lens
Headsets AR kwadokwara ọkpụkpọ òkù Realit Okpu Agha Lens
Reflective mkpuchi Anya m
* Tụkwasị & Aspherical anya m
Ogbo Ìhè Lens
Sports enyoanya usoro
Safety Okpu Agha Lens
Ski enyoanya Lens
Nọkwa Windproof Anya m
Igwu enyoanya Anya m
Safety & Protection enyoanya usoro
Industrial Labor Insurance Anya m
Military enyoanya iko
Medical Eye Protection iko
Laser echebe iko
Fire Nkpuchi Anya m
Gernel iko Series
Myopia Anya m
Kemeghi Progressive Multifocal Anya m
Ekewasị iko anya m
Graphic iko anya m
Uzo Products Series
Acryli ihe n'ụlọ
Acryli hotel onunu
Acryli ngosi guzoro
Eṅomi REVO mkpuchi
Ebu Design & Ime
Optical Lens akpụzi
Profiled n'elu polishing
About Products Ozi
Nke ngwaahịa na ị na-emepụta?
Anyị isi ngwa anya na ngwaahịa ndị nile di iche iche nke * Tụkwasị na-abụghị * Tụkwasị oghere, VR 3D oghere, Ikanam oghere, uzo acrylic ngwaahịa ( art ọrụ, ezinụlọ na hotel onunu, agụmakwụkwọ, isiokwu nke-adị kwa ụbọchị ojiji, wdg ) , HUD ntule oghere, nchekwa okpu agha visors, egwuregwu oghere (Ski enyoanya lens, igwu oghere, Bicycle ọduọ oghere), Ugogbe anya maka anwụ oghere, Industrial echebe oghere, dị iche iche na pụrụ iche ekara curved n'elu anya m, plastic ngwaahịa, na Ebu.
Nwere ike ị na-enye OEM mmepụta?
Ee, anyị nwere ike. Anyị nwere ike ime akpụzi n'ichepụta, mmepụta na nhazi nke ike ọrụ dị ka ndị ahịa 'nghọta ma ọ bụ n'omume.
Ma ị nwere ike mere maka anyị?
Chọpụta, Ọ bụrụ na ị nyere anyị gị echiche na yiri kwa, anyị ga-eme ndokwa zuru ezu akwụkwọ nke imewe anwu gị nkwenye. Tupu iji anyị ga-ana imewe ego, ma n'oge uka mmepụta, anyị ga-alọghachi gị imewe na-eri.
Nke craft anyị nwere ike iji na mmepụta?
Ike: Iji gbochie ngwaahịa site na ọkọ, eyi, na mgbochi mmetụta
Dyeing: Tinye ink na akụrụngwa, ka ngwaahịa na dị iche iche na agba
Electroplating: Kwuonụ na grajentị agba, Water silver agba, multicolored agba , Nlereanya plating, etc maka mara mma n'elu mmetụta.
Mkpuchi: Iji ngwa anya mkpa film na agụụ technology, na ngwaahịa n'elu plating mgbochi UV film, AR film, mgbochi mkpisiaka film, wdg
Gịnị banyere sample ụgwọ na nnyefe?
Sample ụgwọ dị ka kpọmkwem ngwaahịa, ma ọ bụrụ na ọ bụ nnukwu mmepụta, anyị nwere ike iweghachi sample version ego maka ị na-eri nke ngwaahịa.
Mgbe payed sample version ego, ahịa na-eziga anyị a gosiri file / email, dị ka mgbagwoju anya nke ngwaahịa, anyị na-enyocha oge nke ibuo anwụ na proofing oge. Sample version nnyefe bụ 5 10 N'oge na ọtụtụ ndị na-. Ọ bụrụ na ị chọrọ yiri nkata sample iji gosi àgwà, anyị nwere ike inye gị ịlele maka free, ị dị nnọọ mkpa ịkwụ ụgwọ maka njem mmefu.
Izipu samples site TNT , gbasie , FedEx , DHL Express.
Ị nwere ebu niile gosiri na ngwaahịa?
Foto na website na-emepụta site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, naanị awa ka a kwuru okwu ya, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe nkọwa biko jụọ anyị nwoke na-ere.
Olee otú ogologo bụ ebu mepụtara oge?
Dị ka size na mgbagwoju anya nke ngwaahịa na-ekpebi a otu set of ebu oghere oge na imecha oge, dị ka chọrọ nke iwu na-ahịa ka amata ebu oghere nọmba ma detuo ebu ọnụ ọgụgụ. Mgbe ịchọpụta na sample ma ọ bụ na-eru, General ebu n'ichepụta okirikiri nke 20-30 ụbọchị.
Gịnị bụ MOQ?
The kacha nta iji ibu bụ 3K, Anyị na-na-anabata obere obere nke mgbagwoju iwu, ma price ga-elu. Ọ bụrụ na iwu bụ nnukwu, anyị nwere ike inwe mma akụrụngwa ahịa ma belata management-akwụ ụgwọ, n'ihi ya, anyị nwere ike inye ọnụ ala price.
Olee otú ogologo bụ nnyefe oge?
Dị ka ebu oge, iji quantities na ndokwa nke iji, n'ozuzu anyị na-nzipu ngwaahịa n'ime ụbọchị 20 mgbe na-eme mold.Delivery ngwaahịa. Kasị mma anyị ndekọ bụ 50000 n'ime 1day maka VR oghere
Gịnị bụ gị nnyefe ụzọ?
Common EXW, FOB, CIF, wdg
Gịnị bụ gị certifications?
ISO9001, SGS ule akụkọ na ndị ọzọ, bụ nke na-n'aka niile na ngwaahịa mmepụta ọganihu were were.
ihe bụ ụgwọ?
Anyị bụ ndị a so Alibaba Trade nkwa nke bụ a ọhụrụ ọrụ Alibaba, na-echebe asịwo si ugwo suppliers iji hụ suppliers mezuo ha ibu ọrụ banyere iji nnyefe na ngwaahịa mma. Ị nwere ike ịkwụ ụgwọ site na ugwo na Alibaba, ma ọ bụ jiri Paypal. Large ngwongwo anyị ịmụta T / T 30% ego ugwo, itule ugwo megide oyiri nke Bl.
About The Mbupu Ozi
Anyị nwere ike iji aka anyị mbupu gị n'ụlọnga?
Ee, ị nwere ike. Anyị na-ama ebere ye ọtụtụ forwarders. Ọ bụrụ na ị chọrọ, anyị nwere ike ikwu na ụfọdụ forwarders gị na i nwere ike tụnyere ndị ahịa na ọrụ.
N'ọdụ ụgbọ mmiri anyị Mbupu?
Ọ bụrụ na m chọrọ ileta gị factory, nke bụ kacha nso mba ọdụ ma ọ bụ anụ ụlọ ọdụ?
Shenzhen Bao'an International Airport bụ kacha nso ọdụ, Guangzhou- Baiyun International Airport bụ obere anya. Biko gwa anyị n'ihu gị na-eleta, anyị ga-eme ndokwa-akwọ ụgbọala eburu gị.
About Order Usoro
1, Nchọpụta-Professional e kwuru
2, Akwado na price, ụzọ oge, sere, ịkwụ ụgwọ okwu wdg
3, Sales eziga akwụkwọ ọnụahịa profoma na akara.
4, ahịa na-eme ka ugwo maka nkwụnye ego ma ọ bụ sample ego na-eziga anyị Bank nnata.
5, mbụ Production Stage-agwa ndị ahịa na anyị nwetara ugwo, ga-eme ka ndị sample dị ka gị arịrịọ, na-ezitere gị foto ma ọ bụ Samples na gị ihu ọma. Mgbe ihu ọma, anyị na-agwa anyị ga-ndokwa mmepụta & agwa ndị na-eme atụmatụ oge.
6, Middle mmepụta-izipu foto na-egosi na mmepụta akara nke ị nwere ike ịhụ gị ngwaahịa na. Akwado ndị na-eme atụmatụ nnyefe oge ọzọ.
7, End Production-Mass mmepụta ngwaahịa foto na samples ga-eziga gị maka ihu ọma, ị nwekwara ike ndokwa ọzọ Nnyocha.
8, Clients ugwo maka nguzo na anyị na-eme ndokwa mbupu ngwongwo.
9, Order nwere ike na-ekwu "imecha" mgbe ị na-enweta ngwongwo na afọ ju ha.
Nzaghachi anyị banyere Quality, Service, Market nzaghachi & Aro. Na anyị nwere ike ime ka mma.
anyị a rụpụta. Anyị nwere zuru ezu ebu na akpaka mepụtara ngwá, ya ana achi achi anyị nwere ikike na-ebu mmepụta usoro n'oge nnyefe.
10 afọ Ahụmahụ
anyị nwere ihe karịrị 10 afọ ahụmahụ ọrụ a. Ọ pụtara na anyị nwere ike ịhụchalụ nsogbu maka iwu na-mmepụta. Ya mere, ọ ga-eme ka hụ na ifiọk ihe ize ndụ nke nsogbu na-eme.
Na-ezo aka na-ezo Service
e nwere otu onye ahịa na-anọchi anya onye ga-ejere gị ozi site na njuputa-na ngwaahịa Ẹnam ekese si. N'oge usoro, ị dị nnọọ mkpa na-atụle ya maka nsogbu nile na ụzọ na-azọpụta ọtụtụ oge.
maka nke ọ bụla iji, echesinụ nnyocha ga-rụrụ site na QC ngalaba tupu mbupu. The ọjọọ àgwà na ọnọdụ ga-ezere n'ime ụzọ.
N'ihi na jụrụ ase banyere anyị na ngwaahịa, biko hapụ gị email ka anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.